Archive du 16-févr-2022
Mitohy ny olana Tsy levon’ny vavonin’ny TGV-MAPAR i Ntsay
Tsy marin-toerana fa misavoritaka ambony ambany ny Fanjakana Rajoelina eo anatrehan’ny fipoahan-javatra miseho efa ho lava, ankoatra ny olana efa mianjady. T
Tsy misy adihevitra fa dia samy miandry fahasahiana avy amin’ny filoham-pirenena Malagasy aorian’ny diany avy any Eoropa izany amin’izao fotoana izao ny ankamaroan’ny mpanara-baovao.
UKRAINE NAFINDRAN’I ETAZONIA NY MASOIVOHONY
Nanapa-kevitra nanakisaka vonjimaika ny Masoivohony tao Kiev ho any andrefan’i Ukraine any Lviv manakaiky an’i Pologne ny Amerikanina.
Fandraikiraikena Manana paikady hafakely ireo mpisoloky Cash point
Tovolahy miisa 02 no voasambotry ny Polisin’ny Fifamoivoizana tetsy Ankazomanga omaly tokony ho tamin’ny 10 ora maraina rehefa nisoloky.
Lalatiana Rakotondrazafy “Mbola te hanohy aho, fa tsy olana raha hesorina”
Namaly bontana ny resabe samihafa momba azy ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Andriatongarivo omaly.
Fanavotana ny JIRAMA Mitombo hatrany ny fahasarotana
Azo lazaina ho mitombo hatrany ankehitriny ny fahasarotana mikasika ny fanavotana ny Jiro sy rano Malagasy na ny orinasa JIRAMA.
Miitatra ny ampamoaka Depiote mianadahy indray no voatonontona
Miitatra toy ny sima misioka ilay raharaha nampiala ny Minisitry ny fitsarana Atoa Imbiki Herilaza na “Imbiki gate”. Mitombo isa ny olona ambony sy politisianina voatononontona ankoatra ny olon-tsotra sivily mpanao afera,
Rivodoza Dumako Mitondra rotsak’orana matevina any avaratra atsinanana
Niditra an-tanety tao Soanierana Ivongo omaly tamin’ny 03 ora tolakandro ny rivodoza DUMAKO. 75 km/ora ny rivotra miaraka aminy, arahina tafiotra 100 km/ora.
Disadisa anatiny Nataon’ny MAPAR fanadihadiana ny Depiote Brunelle
Taorian’ny kiana nataon’ny Filoha, nampanantsoin’ny vondrona politika MAPAR ny Depiote Brunelle Razafitsiandraofa omaly. Anton’io ilay ny fanehoan-kevitra nataony manakiana ny laharampahamehan’ny fitondrana, ka isan’izany ny teleferika.
Edgard Razafindravahy « Hametrahana Parc industriel ao Ambatolampy »
Mitety faritra, midina ifotony, nandrisika ny mpandraharaha hiroso lalina kokoa ny Minisitra ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy.
Minisitry ny fiarovana Tsy mazava hatreto ny tena anton-diany tany Russie
Nisy ny fihaonana teo amin’ny Masoivoho Rosianina eto Madagasikara sy ny Minisitry ny fiarovam-pirenena Jeneraly Rakotonirina Léon Richard, nanao fintina ny dian’ity farany tany Moscou Renivohitr’i Russie.
Fiantraikan’ny rivodoza Nitondra fanampiana mitentina 100 000 dolara i Etazonia
Nanomboka ny iray amin’ireo lahasa kasainy hatao hanampiana ireo niharam-boina tamin’ny ny rivodoza Batsirai ny Sampan-draharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (USAID),
Fihaonana an-tampon’i Eoropa sy Afrika Miandrandra anjara amin’ilay 150 miliara euros ny Fitondrana
Handray anjara amin’ny Fihaonana an-tampon’ny Fivoriamben’ny Vondrona Eoropeanina (UE) sy ny Vondrona Afrikanina (UA) andiany faha-6 hatao any Bruxelles manomboka ny 17-18 febroary 2022 izao i Madagasikara.